Inona no fiantraikan'ny paikadin'ny mikrô vs. Macro-Influencer | Martech Zone
Inona no vokatry ny paikadin'ny mikrô vs. Macro-Influencer
Alakamisy, Septambra 14, 2017 Douglas Karr
Ny marketing Influencer dia mitoetra eo anelanelan'ny mpiara-miasa am-bava izay atokisanao sy ny dokambarotra karama apetrakao amin'ny tranokala. Matetika ny influencers dia manana fahaiza-manao lehibe hananganana fahatsiarovan-tena fa ny fahaizan'izy ireo mitaona ny vina amin'ny fanapahan-kevitra hividianana. Na dia tetikady mahaliana kokoa sy mahasarika hahatrarana ny mpihaino anao noho ny dokam-barotra amin'ny sora-baventy aza izany dia mitombo ny lazan'ny marketing.
Na izany aza, misy ny fifanoherana amin'ny hoe ny fampiasam-bolanao amin'ny marketing influencer dia tsara kokoa ampiasaina ho vola mitentina kely ho an'ny superstar vitsivitsy - ny influencer makro, na raha ny fampiasam-bolanao dia laniana bebe kokoa amin'ny niche bebe kokoa, influencers tena mifantoka - ny micro influencer.
Ny teti-bola lehibe laniana amin'ny influencer makro dia mety hianjera ary miloka lehibe. Na ny teti-bola lehibe laniana eo anelanelan'ny micro-influencer dia mety ho sarotra ny mitantana, mandrindra, na manangana ny fiantraikany tadiavinao.
Inona no atao hoe Micro Influencer?
Voasokajy ho toy ny influencer micro aho. Manana fifantohana manokana amin'ny teknolojia marketing aho ary mahatratra olona manodidina ny 100,000 amin'ny alàlan'ny sosialy, tranonkala ary mailaka. Ny fahefako sy ny lazako dia tsy mihoatra ny fifantohan'ny atiny noforoniko ary; vokatr'izany, na ny fahatokisan'ny mpihaino ahy sy ny fitaomana handray fanapahan-kevitra momba ny fividianana.
Inona ny atao hoe Macro Influencer?
Ny fiantraikan'ny makro dia misy fiatraikany lehibe sy toetrany lehibe kokoa. Ny olo-malaza fanta-daza, mpanao gazety, na kintan'ny haino aman-jery sosialy dia mety ho influencers (raha atokisan'ny mpihaino azy sy tiany). Mediakix dia mamaritra ity fizarana ity raha ny amin'ny medium:
Ny influencer makro ao amin'ny Instagram amin'ny ankapobeny dia hanana lehibe noho 100,000 mpanara-dia.
Ny influencer makro ao amin'ny Youtube na Facebook dia azo faritana hoe manana farafahakeliny 250,000 mpampiasa na tiana.
Mediakix dia namakafaka maherin'ny 700 ny mpanohana Instagram Lahatsoratra avy amin'ny marika 16 ambony izay miasa miaraka amin'ny influencers makro sy ny micro influencers mba hanombanana izay paikady mahomby kokoa. Novokarin'izy ireo ity sary ity, ny Ady amin'ny Influencers: Macro vs. Micro ary tonga amin'ny famaranana mahaliana:
Ny fandinihanay dia mampiseho fa ny fahombiazan'ny makro influencer sy ny micro influencer dia mitovy amin'ny rehefa manombatombana mifototra amin'ny tahan'ny fifamatorana fotsiny. Ho fanampin'izany, hitanay fa ny influencer makro dia mandresy amin'ny lafiny fitiavana, fanehoan-kevitra ary fahatratrarana tanteraka.
Afaka nanatona an'i Jeremy Shih aho ary nametraka ilay fanontaniana mahavariana - fiverenana amin'ny fampiasam-bola. Raha lazaina amin'ny teny hafa, mijery lavitra ny firotsahana sy ny tiana, nisy fahasamihafana azo refesina tamin'ny mari-pahaizana momba ny fampisehoana toa ny fahatsiarovan-tena, ny varotra, ny fanentanana, sns. Jeremy dia namaly tamim-pahatsorana:
Azoko lazaina fa ny toekarena amin'ny ambaratonga dia azo lalaovina eto amin'ny heviny fa mora kokoa (kely kokoa ny fotoana sy ny fatran'ny bandwidth) hiara-hiasa amin'ireo mpiorina kely kokoa sy lehibe kokoa noho ny fanandramana mandrindra influencer kely an'arivony na an'arivony hahatratra ilay tratra mitovy amin'izany. Ankoatr'izay, ny CPM dia mazàna mihena rehefa miasa miaraka amin'ny influencer lehibe kokoa ianao.
Ilaina tokoa ny mitadidy an'io ao an-tsaina ny mpivarotra rehefa mijery ny marketing influencer izy ireo. Na dia mety hisy fiantraikany bebe kokoa amin'ny farany aza ny fandrindrana be sy ny fampielezan-kevitra mikraoba mahery indrindra, ny ezaka ilaina dia mety tsy ho mendrika amin'ny fampiasam-bola amin'ny fotoana sy angovo. Toy ny zavatra rehetra amin'ny marketing, mendrika ny fanandramana sy fanatsarana amin'ny paikadin'ny fampielezan-kevitrao.
Heveriko fa zava-dehibe ihany koa ny hitadidiana fa io dia nifototra tamin'ny Instagram fotsiny fa tsy fampitaovana hafa toy ny fanaovana bilaogy, podcasting, Facebook, Twitter, na LinkedIn. Mino aho fa ny fitaovana hita maso toa ny Instagram dia mety hamily ny valin'ny fandalinana toy izao ho fanasoavana ilay olo-malaza.
Tags: amerikana rag ciebumbledaniel wellingtonGillettemihatraSary torohayInstagramhery miasa manginamediakixfitaomana kelynordstromsephora
Oct 7, 2017 amin'ny 2: 19 AM
Ireo mpanentana dia tsy isalasalana fa ampahany lehibe amin'ny tetikady marketing, indrindra amin'ny tontolon'ny B2B. Ho an'ny mpanapa-kevitra momba ny fividianana B2B, ny fitarihana ny mpivarotra no lakileny. Raha toa ny influencer afaka manome toky ho an'ny mpivarotra dia manampy fahatokisana fanampiny izany. Tao amin'ny ThoughtStarters (www.thought-starters.com) dia niara-niasa akaiky tamin'ny orinasa manerantany izahay nanampy azy ireo hamaritra sy hampandeha ny programa fampiroboroboana ny influencer ary hitantsika fa imbetsaka izy ireo no tsy nahalala ny influencer rehetra. Ohatra: Ho an'ny mpanjifa manerantany dia fantatray fa ny Academia avy amin'ny anjerimanontolo mitarika dia azo ampiasaina ho toy ny influencer lehibe. Nanangana programa iray izay nifaneraserana tamin'izy ireo izahay & tamin'ny alàlan'io dia nahafahan'ny mpanjifa nanokatra làlana vaovao tsy noeritreretina taloha tao amin'ny paikadim-pifandraisan'izy ireo ary nanomboka nioty ROI koa izy ireo. Noho izany dia zava-dehibe amin'ny orinasa ny mamantatra ireo mpiara-miombon'antoka afaka manampy azy ireo hahazo tombony bebe kokoa amin'ny paikadim-pifandraisan'izy ireo.